काम कुरो एकातिर, कमरेडहरु जात्रातिर ! « Gajureal
प्रकाशित मिति: १६ बैशाख २०७८, बिहीबार १५:५०
सम्भावना नभएका र संस्कार नरहेकालाई कसैले गन्दैनन्, कुरा नजानेको वा कसैले नमानेको पात्रलाई कसैले भन्दै भन्दैनन्। भन्ने भनेको सुन्न सक्नेलाई नै हो, सुनेका कुरा गुन्न सक्नेलाई नै हो ! सज्जन ठानिएकाले दुर्जनको ब्यबहार देखायो भने, निष्कलंक भनिएकाले कलंकको टिका लागयो भने यसैलाई भनिन्छ – ‘बिनासकाले बिपरित बुद्धी
यो कुरा पहिला पहिला काम पाउन सकेनाैं भन्ने ‘कमरेटहरु’का लागि हो । ठाउँमा आउन सकेनौ भन्नेहरुका लागि हो । हिजो काम नपाउँदा जनताले मानेकै हो । तिम्रा आदर्श बचनलाइ सही ठानेकै हो । खोक्रो कुराको स्वाद बोक्रो नकोट्याउन्जेल मात्र हुन्छ ‘कमरेटहरु’ ! बोक्रो कोट्याएपछी गुदी देखिनु पर्छ । गुदी केलाउने बुद्धी पनि देखिनु पर्दछ ! चिलायो भन्दैमा मनलाग्दी कान्हाउनु हुँदैन, कुहिएर जताततै गन्हाउनु हुँदैन !
ठुलो लडाँइबाट माल पाएपनी चाल पाएको देखिएन ! यसलाई मसिनो ढंगले केलाउनु पर्दथ्यो ! तर केलाउने, निफन्ने त कुरै छोडौं ! यहाँ त मनलाग्दी मायाँ प्रिती खेलाउने देखि घुमाएर कमिशन मिलाउने, नीजि स्वार्थ मिल्दा जोड्ने नमिल्दा तोड्ने र फोड्ने सम्मको जाँगर देखिन थाल्यो !
कामरेडहरुमा लाखौँ कार्यकर्तालाइ भेडाबाख्रा ठान्ने ‘पर-वृत्ति’ देखिँदैछ ! देशलाई ‘नीजी चरन’ मान्ने इतिहास लेखिँदैछ ! असिमित नेतालाई बफादार गोठाला भन्ने र सिमित नेतारु हैसियतदार मालिक बन्ने प्रवृत्तिको विकाश हुँदैछ ! पद प्रतिष्ठाले सुसज्जित हुनेले आफुलाई सिंहासनमा सजाउने र लाखौँ जनतालाई शासनले कजाउने संस्कारको विकाश भएको छ !
‘कमरेटहरु’ , ऐले सम्म तपाईँ महान हुनुहुन्छ । तपाईं नै देशको शान हुनुहुन्छ ! सामन्ने आएर कसैले केहि नभन्ला, तपाईंले गरेका कर्तुतका ठेली नगन्ला ! तर, तपाईंले हेक्का राख्नु पर्छ, चुपचाप बस्नेहरु सबै बहिरा हुँदैनन् । आहत नै किन नहोस्, चिच्याएर रुँदैनन् ! तर, गौंडा अवश्य रुङ्नेछन् । मौका मिल्ना साथ् ठुङनेछन्, चेतना भया !
ऐलेसम्म त जनताको मनमाथी मनलाग्दी मडारीने बहाना छ । त्यसैले, जनजनको मनबाट बढारिने सम्भावना पनि छ ! जनताले उच्च ओहदामा बसेर पिरतीमा बेरिनेको कथा मस्तिस्कमा लेखेकाछन् ! नाफाखोर माफियाको जालोमा घेरिनेको मुहार राम्ररी देखेकाछन् ! आवरणमा आदर्शका थोत्रा लुगा सिलाउने, भित्रभित्रै अरवौंका कमिशन मिलाउनेहरुका डंका सुनेकाछन् । कुरैकुरामा अमुल्य समय लपेटीएकाे राम्ररी गुनेकाछन् !
भाई फुटे गौंवार लुटे भन्ने जान्दा जान्दै पनि आफ्नैले –आफ्नालाई कुटेको, नीजी स्वार्थका लागि भाइ-भाइ फुटेको पनि हेर्दैछौं । हिजो भुईंमा हिड्न नसकेर लडेकालाई धुरी चढ्न मन लाग्यो भन्दैमा ढोडको लिस्नो ठड्याएर जनता हँसाउँदै हुनुहुन्छ ! देशलाई अनिश्चितताको दलदलमा फंसाउदै हुनुहुन्छ ! ‘यसैलाई भनिन्छ- बिनासकाले बिपरित बुद्धी !’